Gudoomiyah Xisbiga Kulmiye oo ku dhawaaqay shirka golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on September 22, 2015 by sdwo · No Comments
Gudoomyiyaha xisbig talada haye ee Kulmiye Muuxe Biixi Cabdi ayaa ku dhawaaqay xiliga uu qabsoomayo shirkii golaha dhexe ee xisbiga. Muuse biixi oo shir jaraaid ku qabtay xarunta madaxtooyada dhexdeeda oo ay xubno badan hareeraha ka taagnaayeen sida Gudoomiye ku xigeenka, Madaxweyne ku xigeenka, Xoghayaha xisbiga iyo madaxkale oo badan oo ka tirsan xisbiga iyo xukuumadaba ayuu shaaca kaga qaaday inuu shirku qabsoomidoono bisha Noverber 1okeeda ee sanadkan 2015ka.
Muuse biixi ayaa meesha ka saaray warar iska soo dabanoqnoqonayey oo sheegijiray inaanu madaxweyne siilaanyo isku soo sharaxaynin doorashada danbe. waxaanu gudoomiyahu cadeeyay in musharax xisbigu yahay Madaxweyne Siilaanyo.
Wararka laga helayo dhinaca madaxtooyada ayaa sheegaya in madaxweyne siilaanyo aanu isku soo taagidoonin doorashada 2017ka markuu dhamaysto mudada loo kordhiyey, isagoo ku dhawaaqidoona inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa dabayqaada sanadka 2016ka. wararkuna waxay intaas kud arayaan inuu isagu taageersanyahay musharaxa xisbiga kulmiye inuu noqdo muuse biixi oo abaal badan u soo galay siilaanyo tan iyo aasaaskii xisbiga.